‘निर्वाचन प्रतिरोधका लागि कमाण्डो शैली अपनाउनु पर्छ’
भन्छन–‘जनबिरोधलाई गिरफ्तार गरेर निस्तेज गर्न खोज्नु गलत छ’
प्रकासित मिति : २०७४ बैशाख १४, बिहीबार प्रकासित समय : ०९:०२
अहिले नेपालको राजनीतिक अवस्था अत्यन्तै गम्भिर मोडतिर गइरहेको छ। मालेमावादको जादुगरी हतियार नेपाली क्रान्तिको मेरुदण्ड केही नेताहरुको गद्दारिको कारण ओझेलमा परेको छ, तर नामेट भने हुदैन । अब जाग्छ फैलिन्छ यसमा कुनै शङ्का छैन । हाम्रो अस्तित्व मेट्न खोज्ने लम्पसारवादीहरुले धेरै नउम्लिएको राम्रो पोखिएपछि उठाउन गाह्रो पर्ला ।
एमाले कांग्रेसका मित्रहरू अलि जिम्मेवार बन्नुहोस, तपाईहरुसँग कम्युनिस्ट पार्टीले अहिले जोरी खोजी रहेको छैन, जनताका एजेन्डाहरु प्रस्तुत माात्र गरिराखेको छ, त्यसलाई मनन गर्न कोसिस गर्नुहोस । तपाईहरु आइलाग्ने स्थितिमा जाइलाग्ने हाम्रो नीति हुने छ।जनता जति सबै हाम्रो मात्रै हो भन्ने भ्रम तपाईहरुले त्याग्न आवश्यक छ । जनताले चाहेपछी निरङ्कुश राजतन्त्र, पञ्चायत पनि ढलाकै हुन । यो सत्यलाई स्विकार गरेर अघि बढ्नुनै राम्रो होला ।
शान्तिपूर्ण कार्यक्रममा जनताको असली सेवकहरुलार्इ दिन प्रति दिन गिरफ्तार पक्राउ र यातना दिने गरिदैछ ? किन यो देशका शासकहरुले जन आवाजलाई निस्तेज पार्न खोज्दैछन ? आखिर खोजेको चाइ के हो त ?
अहिलेको मुलुकमा दलाल राज्य सत्ताले पञ्चायति हर्कत देखाइरहेको छ । जनबिरोधी फटाहाहरुले बनाएको नेपालको संविधानमा प्रष्ट रुपमा लेखिएको छ कि शान्तिपूर्ण तरिकाले सरकारको विरोध गर्न पाउने, जनतालार्इ सचेत गराउन पाइने भनेर तर किन शान्तिपूर्ण कार्यक्रममा जनताको असली सेवकहरुलार्इ दिन प्रति दिन गिरफ्तार पक्राउ र यातना दिने गरिदैछ ? किन यो देशका शासकहरुले जन आवाजलाई निस्तेज पार्न खोज्दैछन ? आखिर खोजेको चाइ के हो त ?
यो देशमा सरकार छ कि छैन जस्तो भाको छ जनतालाई । जस्ले महङ्गी, कालाबजारी, भ्रष्टाचार र दलालिकरणको अन्त्य चाहेको छ, जस्ले दिगो शान्ति र स्वाभिमान चाहेको छ, उसैलाई गिरफ्तार गरेर जेल हाल्ने यो कस्तो कानुनी राज्य हो ?
देशमा दिन प्रती दिन महङ्गी बढेको छ, कालाबजारी मौलाएको छ, दलालिकरण बढेको छ, तर सरकारलाई वास्ता छैन । बिदेशिले सीमा मिचेको छ, सीमानामा मान्छे चरा मरे झै मारिएको छ, तर शासकहरु निदायका छन । यो देशमा सरकार छ कि छैन जस्तो भाको छ जनतालाई । जस्ले महङ्गी, कालाबजारी, भ्रष्टाचार र दलालिकरणको अन्त्य चाहेको छ, जस्ले दिगो शान्ति र स्वाभिमान चाहेको छ, उसैलाई गिरफ्तार गरेर जेल हाल्ने यो कस्तो कानुनी राज्य हो ?
दलाल नेताहरूले देशलाई कंगाल बनाएर रित्याउँदै छन । भ्रष्टाचारीहरुले जनतालाई जबरजस्त रैती बनाएको हामी हेर्न चाहदैनौ । कथित स्थानीय निर्वाचनको ढ्वाङ फुकेर लेन्डुपेहरुले नेपाललाई कमाइ खाने भाँडो बनाउन पाइदैन । यसको प्रतिरोध गर्नुको विकल्प छैन । जनताको शान्तिपूर्ण प्रतिरोध कार्यक्रममा पञ्चायति शैली अपनाउदै सरकारले गिरफ्तारि गर्ने क्रम नरोके प्रतिरोध निश्चित छ । सरकारले गर्ने भनिरहेको निर्वाचन नरोकेमा मेयर र उप मेयरहरुलार्इ कमाण्डो शैलीमा सम्झाउनै पर्छ, त्यो अपनाउनै पर्छ । अर्को विकल्प छैन ।
(आयुश खड्का (परिवर्तनप्रेमी) पाठक पत्र र राजनीतिक विषयमा कलम चलाउने गर्दछन । उनी हाल बैदेशिक रोजगारीको क्रममा मलेसियामा रहेका छन । उनी जनप्रगतिशील मोर्चा मलेसियाका प्रवक्ता समेत हुन ।)